Vafambi vasina kuvharirwa vanobva kuUK, Spain, Portugal, Netherlands, Greece neCyprus vanofanirwa kunge vaine 24-awa isina kunaka COVID bvunzo yekupinda muFrance
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » France Kuputsa Nhau » Vafambi vasina kuvharirwa vanobva kuUK, Spain, Portugal, Netherlands, Greece neCyprus vanofanirwa kunge vaine 24-awa isina kunaka COVID bvunzo yekupinda muFrance
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Cyprus Kupwanya Nhau • France Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • Greece Kupwanya Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Netherlands Kuputsa Nhau • nhau • Portugal Kuvhuna Nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • Spain Kuputsa Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • UK Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Mutungamiri weFrance, Jean Castex akazivisa kuti zvirambidzo zvevapfuuri vanobayiwa majekiseni ari kubviswa neMugovera
France inoda 24-awa isina kunaka coronavirus bvunzo yevasina kuchena vafambi vanobva kuUK & 5 EU nyika.
Kune vasina kuvharirwa vashanyi vekuUK, nguva yekupedzisira yeiyo yakaipa COVID-19 bvunzo yakadzikiswa kubva pamaawa makumi mana nemasere isati yasimuka kuenda kumaawa makumi maviri nemana.
Nguva yakatarwa yevashanyi vasina kubviswa kubva kuSpain, Portugal, Netherlands, Greece neCyprus yakaderedzwa kubva kumaawa makumi manomwe nemaviri kusvika makumi maviri nemana.
Vakuru veFrance vakazivisa kuti vashanyi vasina kubayiwa kubva kuUK, Spain, Portugal, Netherlands, Greece neCyprus vanofanirwa kuendesa yakaipa PCR kana antigen bvunzo yeCOVID-19 yakatorwa nguva isingasviki maawa makumi maviri nemana vasati vaenda vasati vatenderwa pinda Furanzi.
Zvekusabayiwa UK vashanyi, nguva yekupedzisira yeiyo isina kunaka COVID-19 bvunzo yakadzikiswa kubva maawa makumi mana nemasere isati yasimuka kuenda kumaawa makumi maviri nemana.
Nguva imwechete yakatarwa yevashanyi vasina kubayiwa kubva kuSpain, Portugal, Netherlands, Greece neCyprus yakadzikiswa kubva paawa makumi manomwe nemaviri kusvika pa72.
Iko shanduko mune zvinodiwa zvekupinda zvakagadzirirwa kuti zviitwe neMuvhuro, Chikunguru 19.
Panguva imwecheteyo, Mutungamiriri weFrance, VaJean Castex vakazivisa kuti zvirambidzo zvevafambi vakabaiwa majekiseni zviri kubviswa neMugovera.
"Mishonga inoshanda pakurwisa hutachiona, kunyanya musiyano weDelta," akadaro Prime Minister, achiwedzera kuti vafambi vanobva kunyika dziri kuFrance dzinonzi 'rondedzero tsvuku' vachiri kufanira kuzviparadzanisa kwemazuva manomwe kunyangwe vakabayiwa nhomba.
Iko kushandurwa kwemutemo wekupinda muFrance kunouya zuva mushure mekunge UK yabvisa France pachirongwa chayo kubvumidza zvizere majekiseni Brits kudzivisa kugara kwavo voga pakudzoka kubva kune 'amber-runyorwa nyika'.
Vanhu vanosvika kubva kuFrance vachiri kufanira kuzviparadzanisa kwemazuva gumi uye vanoedzwa kaviri nekuda kwekupararira kwemhando yeBeta, yaimbozivikanwa seSouth Africa, vakuru vakati.
"Isu tagara takajeka kuti hatizononoka kutora matanho nekukurumidza kumiganhu yedu kumisa kupararira kwe COVID-19 uye kuchengetedza zvakawanikwa nehurongwa hwekubaya nhomba," akadaro Munyori weUk Health Sajid Javid.
Mutungamiri weFrance, Emmanuel Macron akataura svondo rino kuti vese vashandi vehutano vanofanirwa kubayiwa majekiseni naGunyana 15, nepo masayendisiti emunyika akadaidzira kuti munhu wese apiwe nhomba.
Sekureva kwehurumende, pazvese, zvikamu makumi mashanu nezvishanu kubva muzana zvevagari vemuFrance vakabaiwa zvakakwana.